इलाममा गाई पनि रेडियो सुन्छन्,कृषकहरु मन्त्रमुग्ध ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कृषि > इलाममा गाई पनि रेडियो सुन्छन्,कृषकहरु मन्त्रमुग्ध !
लाम । गाई पनि रेडियो सुन्छन् भन्दा तपाई पत्याउनुहुन्नहोला । तर इलाममा जब गाईले रेडियो सुन्छन् ‘पाउर काडेर’ ( फिँज काडेर) मस्त हुन्छन् । सफा, चटक्क परेको गाईगोठ देखेर यहाँ घुम्न आउने अनेकौँ कृषकहरु मन्त्रमुग्ध हुन्छन् र नयाँ प्रविधि र तरिका सिकेर फर्किन्छन् ।
त्रिबदर्श गाई फार्मका सञ्चालक कुमार रेग्मीले गाईलाई कुनै पनि प्रकारको ध्वनिले तनाव नदिनका लागि विभिन्न एफएम रेडियो सुनाएको र त्यसले दूधको उत्पादन नघटेको बताए । उनले त्यहाँ स्थित चियाबारी एफएम, इलाम एफएम, पाथीभरा एफएममा आउने बिहानका भजन र दिउँसो आउने विभिन्न गीत सुनाएर दूध उत्पादनमा कमी आउन नदिन गाईलाई रेडियो सुनाएको जानकारी दिए ।
गाईवस्तु तनावमुक्त भएपछि दूध उत्पादन नघट्ने गरेको उनले बताए ।
सफा, चटक्क परेको गाईगोठमा अनेकौँ कृषक उनले सञ्चालन गरेको फार्मबाट मन्त्रमुग्ध हुन्छन् र नयाँ प्रविधि, तरिका सिकेर फर्किन्छन् ।
भारतको पटनाबाट झन्डै रु तीनलाखको लागतमा सो उन्नत जातको गाई भित्र्याएर फार्म सुरु गरेका रेग्मीले ७५ प्रतिशत बिमा गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत २३
२०७३ चैत्र २३ गते १२:०१ मा प्रकाशित
बैंकको ७० प्रतिशत हकप्रद पाउन चाहनुहुन्छ ? बुक क्लोजको मिति थाहा पाउनुहोस्
अब हरेक बैंक/वित्तीय संस्थाले अनिवार्य ग्राहकलाई हरेक कारोबारको सूचना दिनुपर्ने !
तेल नदिने पम्पलाई कारवाही गरिने, हिजो मात्र २६ लाख लिटर पेट्रोल आयात
स्थानीय चुनाव घोषणाको असर : आजको सेयर मार्केट कहाँ पुग्ला !
१ करोडको आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने